I-SAFA isikhiphe isexwayiso esishubile kuWits | News24
I-SAFA isikhiphe isexwayiso esishubile kuWits
Cape Town – Isikhulu esiphezulu seSouth African Football Association (SAFA), uDennis Mumble, usedalule ukuthi bahlela ukuthathela iWits izinyathelo uma ngabe le kilabhu ingamkhululi uPhakamani Mahlambi ukuze ezodlala kumqhudelwano i-U20 Africa Cup of Nations (AFCON).
Lo mdlali oneminyaka engu-19 ubudala ubizwe ukuthi azodlalela Amajita njengoba ebelokhu eshaya into ecokeme kumaClever Boys kule sizini njengoba le kilabhu isembangweni wesicoco seligi.
Kodwa-ke iWits ishaya phansi ngonyawo ngokudedela lo mdlali ngenxa yokuthi lo mqhudelwano awukho ngaphansi kwekhalanda le-FIFA.
Ngokombiko weSowetanLIVE, uMumble uthi ukubizelwa komdlali eqenjini lesizwe iyona nto ebaluleke ukuzedlula zonke, wathi futhi uma ngabe iWits iqhubeka nokudaza inkani iSAFA izoyithathela izinyathelo.
“Sesimfake ohlwini futhi silindele ikilabhu ukuthi ikhulule umdlali. Sesivele sesiyazisile ikilabhu ukuthi sizothatha izinyathelo uma bengamkhululi umdlali,” kusho uMumble ngoLwesibili.
“Okusalayo ukuthi, iqembu lesizwe libaluleke kakhulu ukwedlula ukuzinikela ekilabhini futhi angeke size siguquke kulokho.
“Ayikho enye ikilabhu kuligi esike yakuphikisa, futhi ngalokho, noma ngabe iyiphi ikilabhu edala ukubanjwa kwabadlali sizoyithathela izinyathelo futhi ngikholwe uma ngithi siyithathela izinyathelo njengoba sikhuluma.”
Umqhudelwano we-U20 AFCON uzoqala kule mpelasonto ngeSonto, mhlaka-26 kuFebhuwari eZambia, kanti uyoze uphele ngomhlaka-12 kuMashi.